1001 bài thơ Táo quân chầu trời vui, hay, ý nghĩa nhất | Anybook.vn - Anybook
1001 bài thơ Táo quân chầu trời vui, hay, ý nghĩa nhất | Anybook.vn
(iini.net) Famintinana ireo tononkalo mahafinaritra indrindra, mahaliana ary misy dikany ao amin’ny Tao Quan mitsaoka ny lanitra amin’ny taona 2019. Tononkalo midera ny zavatra tsara ary koa maneso ny fahazaran-dratsy, ny fihemorana tamin’ny taon-dasa. Manantena fa hiova ho tsara kokoa ny taona vaovao!
Tononkalo Tao Quan Adadoring Heaven (sary: ​​internet)
1 POETA SAMBATRA MIALA AN’ANDRIAMANITRA
1.1 TAO QUAN Mitsaoka Lanitra – Tononkalo: Ny maraina
1.2 Tien Apple to Heaven – Tononkalo: Ngan Pham
1.3 FANAOVANA FANAOVANA – Tononkalo Luc Bat: Tran Bach Thang
1.4 AAO QUAN BAO – Poetry of Luc Bat: Old Man Hau Giang
1.5 TIEN TAO MANDOA AN’ANDRIAMANITRA – Tononkalo: Phan Bach Le
1.6 SOHO TAO QUAN – Tononkalo: Si Tam
2 MANDEHA AMIN’ANDRIAMANITRA NY POETAN’I TAO QUAN
2.1 Vonjeo ahy ny paoma – Tononkalo mahatsikaiky: Fitetezana mampalahelo tsy misy anarana
2.2 TAO QUAN Adoring Heaven – Tononkalo: Romooc Nguyen
2.3 DISTRICT Ong TAO – Tononkalo: Phuc Nguyen
2.4 AAO QUAN TIME MODERN @ – Tononkalo: Tran Van Nghe
2.5 TIEN TAO QUAN ANY AN-DANITRA – Tononkalo: Phan Hanh
POETA SAMBATRA MIALA AN’ANDRIAMANITRA
Tononkalo mahatsikaiky nosoratana tamin’ny 23 Desambra – ny andro hiverenan’ny Tao any an-danitra. Andian-tononkalo misy hatsikana, fahazaran-dratsy maneso, fihemorana amin’ny taona taloha, manantena fa ho tsara kokoa ny zava-drehetra amin’ny taona vaovao..#01. (⇧)
TAO QUAN Mitsaoka Lanitra – Tononkalo: Ny maraina
Ho any an-danitra ny paoma anio
Mba hiresaka haingana amin’ny olona eto an-tany
Sarotra sy sarotra ny fiainana
Amin’ity taona ity dia avy ny orana sy ny rivotra ary ny hatsiaka
Sad paoma mitaingina trondro
Mampalahelo ny fon’ny olona be tendrombohitra
Be dia be ny ankizy mahafatifaty
Mangatsiaka ny andro fa tsy faly ny tongotro
Milalao amin’ny tantara andavanandro
Ahoana no ampisehoanao ny fitiavam-bola be loatra?
Firy taona sy nofinofy
Miandry ny andro hilalaovana zavatra maro
Avy eo dia tsy maintsy mifikitra amin’ny papango ny paoma
Tontolo maloto Kopia mangidy
Inona izao no holazaiko?
Fa ny fo dia tena malahelo Apple mampihomehy!
Tien Apple to Heaven – Tononkalo: Ngan Pham
Tsarovy ny andro nitantaran’ny reniko
Ny roa sy ny telo Desambra dia mamerina ny paoma any an-danitra
Saika hiara-mifaly ireo angano
Tsy maintsy manazava ny tantaran’ny fiainana eto an-tany.
Nalahelo tampoka i Neny sady nitomany
Satria ny mahantra tsy manana fanati-pivelomana
Ditin-kazo manitra telo sy lovia vita amin’ny voaniho
Tsy misy lanonana hanaovana veloma tanteraka.
Ankehitriny, mahatsapa tampoka ny taom-baovao Apple
Nandritra ny volana maro dia nosakoako ilay fanaintainana
Dia androany dia safotra tampoka
Ny fahatsiarovana ny reniko dia kenda tamin-dranomaso.
Mivavaha ho an’Ingahy Tao mba hihaona aminy rehefa miverina any an-danitra izy
Ny Emperora Jade anie hitahy ny firenena sy ny vahoaka
Omeo ny ray aman-dreny fiadanan-tsaina ao amin’ny renirano volamena
Ho feno fahasambarana anie ny rehetra.
Tononkalo an’ireo Andriamanitr’Andriamanitra (sary: ​​internet)
FANAOVANA FANAOVANA – Tononkalo Luc Bat: Tran Bach Thang
Tamin’ny taon-dasa, nifankahita tamin’ireo jiolahy aho
Ny tantaran’ny trano, ny tantaran’ny varavarana manodidina ny fo
Ny fitiavan’ny fianakaviana dia volomparasy sy tsy misy dikany
Ka avelao i Apple hipetrapetraka
Mangatsiaka ny lakozia, matevina kokoa ny vovoka
Anio maraina dia misokatra hojerena ny kalandrie
Ny roa sy telo Desambra no alin’ny fitsaohana paoma
Mipetraka malahelo mieritreritra ela
Taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hanakana ny lohan’i Apple
Tamin’ity taona ity dia nanidy an’i Apple satria fotsiny
Tsy tiako hanoratra tantara mampalahelo i Apple.
READ Nguyễn Nhật Ánh và những bài thơ hay nổi tiếng nhất phần cuối | Anybook.vn
AAO QUAN BAO – Poetry of Luc Bat: Old Man Hau Giang
Te-hitatitra any amin’i Ngoc Hoang
Mandeha any an-danitra ny paoma ary mandresy ny rahona
Apple azafady mibitsibitsika eto
Nikorontana izao tontolo izao tato anatin’ny taona vitsivitsy.
Tamin’ny taon-dasa vao nikiakiaka ilay soavaly
Fanaintainan’ny kibo sy aretim-pivalanana ankoatra ny fikapohana ny efitrano
Dia mitsambikina ny soavaly
Tsy manana kaody tokana hilalaovana ny soavaly.
Izany no mahatonga ny fahasahiranana eo amin’ny fiainana
Feno rivotra ny kolikoly sy ny kolikoly
Tsy maintsy atsipy ity raharaha ity
Mandehana any am-ponja mba ho voaheloka ho zaza maitso.
Nantsoin’ny olona hoe mitabataba ny arabe
Mampalahelo tokoa ny lozam-piarakodia
Nipoitra ny tranga Cat Tuong
Ny fandehanana any amin’ny cosmetology dia very lalana hody.
Ahoana ny amin’ny namako akaiky?
Alefa any amin’ny ranomasin’ny olona ny milina fandavahana valo amin’ny iray
Kaontinanta dimy manozona tsy tapaka
Noho ny tafio-drivotra mitsingevana dia nihena.
Ny Ranomasina Atsinanana dia mandà ny hamela heloka
Amboary ny fiarovanao Hoang Sa
Mihorohoro na aiza na aiza izao tontolo izao
Mandeha rà ny loha ary miboiboika ny fon’ny marary.
Ny fon’ny ratsy fanahy dia maro loko
Misy zavatra maro eto amin’izao tontolo izao izay mazava amin’ny lanitra
Midina amin’ny lafiny rehetra ny Emperora Jade
Avelao ny olona hilaza ny fomba mangidy zato.
Ho faly mandre momba izany i Ngoc Hoang
Mandefa ny saranga ambony hitondra avy hatrany ny vahoaka
Andalana vitsivitsy lasa tononkalo
Jade Emperora ny habetsahan’ny Apple adala dia tsy hendry.
Sariitatra mahatsikaiky an’Andriamatoa Cong Ong Tao mivavaka any an-danitra (sary: ​​internet)
TIEN TAO MANDOA AN’ANDRIAMANITRA – Tononkalo: Phan Bach Le
Amin’ity taona ity, mahita an’i Apple sy Andriamanitra
Azafady, tadidio ny mifidy ny teny fanampianao
Amin’ity taona ity, ny toekaren’ny sokatra…
Asa ratsy…aza manahy na inona na inona!
Iza no ratsy ankehitriny?
Samy manana ny zava-drehetra
Nafeniny ny antsasany mba hampifaliana…!
Divay – Dite …Milalao haingana izy…
Divay ihany no ananany fa tsy dite…
Chess – Volafotsy…ra be…
Izy nilalao mba hanampy ny karnavaly tsy raiki-pitia.
Lalao chess misaina lava
Ka miloka tsy misy indrafo izy ireo
Ankizilahy – Ankizivavy … tena tsara vintana koa ny fotoana
Feno korontana ry zareo…!
Maloto ny ankizilahy ambonin’ny ankizivavy
Menatra eny amin’ny lalam-bahoaka…
Tsy ampy fandriana ny hopitaly…
Miaraha mandainga momba ireo zavatra tsy hitanareo matetika…!
Indrindra ny resaka Petrol…
Mampihena be izao tontolo izao…saingy
Tsy afaka mitantana na dia…be loatra Ban…!
Avy eo ny tantaran’i Tham…
Milalao tsara izy… sao manao ny Divine Sutra
Tsy maintsy manahirana ny fahatezeran’ny lanitra…
Omeo kely Izy… mandria am-piadanana amin’ny lafiny rehetra!
SOHO TAO QUAN – Tononkalo: Si Tam
Ny molotra tsy mahasalama
Ny kolontsaina maharikoriko dia marina telo cents
Sakan’ny vava be mpifehy sy mafy loha
Hita fa misy aretina adala ny sekoly.
Voninkazo telo miresaka amin’ny hazo
Miasa mafy foana ny avaratra sy atsimo, atsinanana sy andrefana
Milaza ny olona fa tsy miraharaha
Tampoka teo dia niantsoantso ny mandarina hoe: Tsy mbola vita ny fivoriana.
Mankalaza ny fanambinana ireo vao tonga amin’ny taona vaovao
Tombom-bola aman-taonina ny vola miditra
Amin’ny fiainana ho avy dia manan-talenta kokoa noho ny hatsaran-toetra ny zanaka sy ny zafikeliny
Ny diplaoman’ny manam-pahaizana dia manentana kontinanta dimy.
READ Những bài thơ tình hay nhất thế kỉ khiến bạn đắm say | Anybook.vn
Eny, maharary ny fanapahana ny foitra
Mizara rà mitovy ary mifandevina bibikely an’arivony
Oh, miaraka amin’ny tsiambaratelo ara-barotra voafidy
Na dia samy hafa aza izy ireo, dia mitovy karazana.
Mianara ho olombelona aorian’ny fahafatesana
Avelao hilamina ny vahoaka
Mirary taona vaovao ho an’ny vahoaka
Nandeha i Zhou mba hianatra izay tokony hahitsy.
MANDEHA AMIN’ANDRIAMANITRA NY POETAN’I TAO QUAN
Ity ambany ity ny fanavaozana ny andian-tononkalo Tao Quan Chua Troi izay jerenao amin’izao fotoana izao. Tononkalo mahatsikaiky, maneso zavatra manafintohina ny maso miaraka amin’ny faniriana fa amin’ny taona vaovao dia ho tsara kokoa ny zava-drehetra..
Mr. Apple dia mitaingina karpa mankany amin’ny lanitra (sary: ​​internet)
Vonjeo ahy ny paoma – Tononkalo mahatsikaiky: Fitetezana mampalahelo tsy misy anarana
Androany dia telo amby roapolo Desambra
Io no andro hiverenan’ilay lehilahy Apple any an-danitra
Apple manome ahy teny vitsivitsy
Aminao Andriamanitra momba ny fiainako
Ity andro ity amin’ny fahatanorany
Ny olon-tiako koa dia tovovavy vitsivitsy
Fa satria picky saosy trondro mifidy maina
Raiki-pitia kokoa amin’ny tetika harena
Misy koa ny toetra masiaka
Noho izany dia gaga izy
Na andro na alina, tsarovy ny miandry
Tena adala ny manana vady mody atao
Roa ambin’ny folo rano mangotraka
Ny vatan’ny isa mampalahelo dia misafidy ny tsipika mainty
Ankehitriny dia tsy maintsy malahelo aho
Jereo hoe iza no faly, izaho irery
Ny andro sy ny volana mandefitra
Ankehitriny dia tsy afaka manana soroky ny fitiavana aho
Masiaka kokoa ny ginger antitra
Nahoana ny ankizy antitra no tsy maintsy mandany ny androny irery
Mahafinaritra koa ny mijery fitaratra
Fa maninona no tsy ho very be ianao ry malala
Misy vata maromaro izao ny vola madinika volafotsy
Raha tsy misy vady dia tsy misy fomba hisakafoanana
Tet tonga ao an-kiboko mihodinkodina
Tonga ny lohataona bebe kokoa, ny fahanterana bebe kokoa
Tsy milaza aho hoe akaiky na lavitra
Manantena aho fa miangavy amin-kitsimpo Andriamatoa Apple
Mitenena hampihozongozona ny lanitra
Misaotra an’Andriamanitra noho ny famindram-po sy ny fanampiana
Amin’ny taona ho avy, hihaona amin’ny sambo ny seranana
Ody tsara tarehy, aza manahy momba ny efitranony
Tung Quan misy takolany mavokely
Ny vatan’ny sarivongana pomelo dia misy tsiroaroa
Veloma amin’ny andro manirery
Tsy lany ny vary mipetaka sy ny vola mihoa-pampana
Vavaka amin’ny paoma masina
Fankasitrahana lalina, dikany mavesatra, ozona voasokitra
Firy ny paoma hoy ny ankizy
Raha mbola maniry na inona na inona ny vadin’i Apple dia tsy maninona aho.
TAO QUAN Adoring Heaven – Tononkalo: Romooc Nguyen
Rahampitso dia hivavaka amin’Andriamanitra i Tao Quan
Alefaso amin’ny olona rehetra izao teny izao:
Fifamoivoizana, aza avela ho faty
Aza avela hirehitra ny afo.
Fandrobana sy fanolanana mandrakizay
Mbola olana ho an’ny vahoaka ny fampianarana
Ny fitsarana, fa tsy ny fifandanjana marina
Oay be dia be ny lesoka mila dinihana ry soi????
Manantena fa Apple dia manolotra izany mazava tsara
Ampahafantaro ny Emperora, tsarao ary diniho ny olona tsara fanahy
Ara-potoana ihany koa ny fitsaboana
Nahitsy mafy, ka lasa Luong Y.
Eo amin’ny lalana marina ny toe-karena
Ny fiahiana ara-tsosialy dia natao ho an’ny vahoaka
Fepetra ilaina ny kolontsaina
Fahombiazana, tsy hamoaka izany rehetra izany.
Fa etsy sy eroa manodidina antsika
Heroes Hide, mbola mampijaly olona
Manentana hatrany ny “hanavao”
Mbola sakana maika sy vola foana.
Tena mampalahelo ny mandre izany
Manantena aho fa hanadio izany ny Fanjakana Ambony
Mindrana tsy misy tendrony
Mbola miandry, miandry ny manaraka.
READ Thơ Về Mưa Đêm, 25+ Bài Thơ Về Tiếng Mưa Đêm Đi Tìm Bình Yên | Anybook.vn
Tiako ho manitra areca ny fiaraha-monina
Mirror of Love, mba jereo haingana, mivoaha avy hatrany
Ny etika serivisy aloha
Aza mitsiriritra fa sakanana hatrany ny volam-bahoaka.
Fomban-drazana taloha, tsy maintsy misy olona
Anontanio ny Emperora raha ilaina izany?????
Rehefa ahitra, rehefa tsilo
Rehefa lefona, rehefa tsy misy.
Indraindray tsy haiko izay mitranga
Saingy tiako ho fantatra fa noho ny tendrombohitra izany
Te hisokatra daholo ny olona rehetra
Mangarahara i Thuong Hoang ary manaraka foana.
Sary mahatsikaiky momba an’i Mr. Apple miakatra eny an-danitra (sary: ​​internet)
DISTRICT Ong TAO – Tononkalo: Phuc Nguyen
Miverina any an-danitra ny Andron’ny Apple
Miakatra any i Phen mba hiala voly mandritra ny andro vitsivitsy
Avia, akanjo vaovao
Fanomezana vitsivitsy ho an’ny fairies.
Volamena nivangongo tao anaty siny vitsivitsy
Mitaingina amin’ny tongotrao sy ny pedaling
Miverena any amin’ny antsasa-manilan’ny vilany handry.
Gaga fa nofafana ilay mpamily kopia
Ny mpanjono dia manaparitaka ny vary in-droa in-dimy impito
Ny olona tia paoma dia manome dika mitovy amin’ny andriamanitra
Tsy mila mahafantatra izay miandry ny fanadiovana.
Paoma mampalahelo mitaingina ny rivotry ny lanitra
Teo antenatenan’ilay kitapo dia nisy harona volamena roa nilatsaka
Koa izao tontolo izao votive
Fadio ny mitaraina any aoriana any.
Vao avy nanokatra ny fivarotana “muo tau”.
Jade Emperora Ha “teny vitsivitsy mandrakizay”
Nilaza i Thien Bong fa “zazalahy ratsy” ny paoma
Nosintonin’i Hang Nga ny volony ary nisento, “Oh wow”.
Apple dia mipetraka mangina irery
Nitangorona ny angano kely mba hitondra ny tantara fanomezana
Fanomezana lehibe, fanomezana kely avy any Shina
Taitra sy tezitra izy ka nihazakazaka nivoaka.
Paoma mandeha any an-dakozia zorony
Eny ary, na inona na inona toerana tokony homena tsiny.
# folo. (⇧)
AAO QUAN TIME MODERN @ – Tononkalo: Tran Van Nghe
Hafa noho ny teo aloha i Tao Quan ankehitriny
Ny fiaramanidina itaingenany, tsy mipetraka sy maka tahaka.
Folo minitra dia nitsangana izy mba hiankohoka
Nitatitra ny fahagagana tamin’ny alalan’ny tarehy i Ngoc Hoang.
Ny fifandraisana “wireless” izao
Wifi, internet ary feno satelita.
Fihaonambe video hafa
Mitovy amin’izany koa i Apple, manapaka, maneho hevitra momba ny Face.
Feno sakafo sy zava-pisotro
Osy lava, matavy, divay tandrefana raraka.
Manodidina ny latabatra manompo, milahatra
Ny modelyny rehetra, ny fanjakana indrindra.. Etazonia.
Mbola ao anatin’ny lohataona ny taona
Hey, mena takola, tena “miboridana” – lava tongotra.
More tovovavy “Hifi”.
Serivisy feno, manomboka amin’ny “ivelan’ny” mankany amin’ny “in”.
Ny paoma miaraka amin’i Mr. Dragon
Manala ny adin-tsaina miaraka amin’i Dollar vadiny.
Ny tontolo ambany dia manolotra fanatitra mihaja
Avo ny trano, toy ny mpanjaka ny fiara.
Toy izany ny rehetra – tsara kokoa noho ny resy
Ny fifaninanana hivavaka amin’ny Apple, no vanim-potoanan’ny fandraharahana.
Oh my! Nanadino ny didy
Tena paoma ve tsy lanin’ny olona.
Mitazona ny ranomainty amin’izao tontolo izao
Misy andro “fisandratana” ny fandraharahana hosoka.
TIEN TAO QUAN ANY AN-DANITRA – Tononkalo: Phan Hanh
Alefaso any an-danitra i Apple anio
Mandefa fanantenana noho ny olona mandefitra
Raha jerena ny toe-javatra ankapobeny
Mifanome tanana ho olona ny fianakaviana!
Mitomany sy mihomehy indraindray ny fiainana
Saingy niezaka nandresy ny hakamoana aho ary nitsangana
Mirary soa amin’ny taona manaraka
Ny zafikely mahomby dia tsy manadino ny fakany
Ataovy mamirapiratra ny fanahinao
Mandrosoa amin’ny fomba mahitsy sy mahitsy
Sarotra ny manala ny fotoana
Mifanome tanana mba hangataka an’i Apple hanampy!
Mafana foana ny lakozia
Tanana mazoto mikarakara isan’andro
Misaotra anao Andriamatoa Apple manomboka izao
Fahazotoana miasa na tsia!
Mitazona ny fomban-drazana amin’ny fahazotoana
Mazava ny raharaha ao an-trano, ny raharaham-panjakana sy ny tsy miankina
Tapa-kevitra ny hanorina ny hazakazaka
Mihamitombo hatrany ny fandrosoana, faly ny olona.
Vao avy nahita andian-tononkalo Tao Quan mitsaoka ny lanitra miaraka amin’ny tononkira mahatsikaiky, mahatsikaiky nefa misy dikany ianao. Ny asa vaovao momba ny Tao Quan dia havaozin’ny iini.net haingana araka izay azo atao!..
1001 Ny tononkalo mahafaly, tsara tarehy ary misy dikany indrindra an’i Tao Quan mitsaoka ny lanitra
Trinh Thanh Bien, amin’ny
Previous: KT là gì – Một số cách hiểu về thuật ngữ này có thể bạn chưa biết | Anybook.vn
Next: Đọc truyện Yêu em bằng cả sinh mệnh [Trọn bộ] | Anybook.vn